Akanyanya Nyora Maakaunzi pa Instagram | Zvazvino Zvinyorwa
Mumakore achangopfuura, masocial network akabvumidza vanyori kuwana dzimwe nzira dzekuzviratidza nadzo kuburikidza nadzo kuita kuti zvinyorwa zvavo zvizivikanwe nenyika. Kana makore mashoma apfuura Twitter yakadenha maartist kuti vanyore nyaya dzavo mumavara chete zana nemakumi mana, fashoni pasocial network, Instagram, inofunga kugadzira chinyorwa munzvimbo yakapfava nzira inoonekwa nekukurumidza yekukunda vaverengi vemangwana. Vamwe vevashandisi vanoziva kwazvo maitiro ekuzviita, uye kukuratidza isu tinokuunzira izvi vanyori vakanyanya nhoroondo pa Instagram izvo zvinokukunda.
1 Wakanakisa Munyori Maakaundi pa Instagram
1.2 Kwekupedzisira Usiku Kuverenga
mwedzi miviri gare gare nerwendo rweindia rwakazara uye ikozvino kumhara muLondon kutanga gumbo reUK: iwe zvirinani utende kuti ndiri kutarisa pasi uye nekutenda iyi simba rekubvumidza ini kuti ndiite zvese zvandinozvimanikidza kuti zviite
Nzvimbo yakagoverwa rupi kaur (@rupikaur_) pa Mar 13, 2018 pa 7: 30pm PDT
Con 2.4 mamiriyoni evateveri, Rupi Kaur ndemumwe wevanyori vakakwanisa kuwana zvakanakisa kubva mufashoni pasocial network. Akazvarwa muIndia asi akakurira muCanada, mudetembi uyu 2.0 akatanga rwendo rwake nekuburitsa mabhuku ake maviri, Mukaka neuchi neZuva nemaruva Kutenda kune nhetembo dzakasiyana dzaakatanga kutumira pa Instagram muna 2014. Kune avo vanoyemura prose ine chikadzi, zverudo uye zvemarudzi zvinobata, Kaur's gallery inofadza, kunyangwe iwe uchigona zvakare kuwana iyo pikicha iyo mbiri yake yakakwira: chirongwa chemifananidzo yemuartist maakaratidzika akarara pamubhedha achisiya trace yekuenda kwake kumwedzi. Mufananidzo uyu wakataurwa ne Instagram uye wakazodzokera kuna Kaur.
Kwekupedzisira Usiku Kuverenga
Bhavhadhe rinofadza, GGM! Rangarira kuti sei mumakore zana eUga, Remedios akangoyangarara mudenga uye hatina kuzombonzwa nezvake zvakare? #magicalrealismbiatch Ona mamwe maprinta akadai pane yangu @ society100 chitoro: society6.com/lastnightsreading #gabrielgarciamarquez
Nzvimbo yakagoverwa Kate gavino (@kupedzisira kuverenga) pa Mar 6, 2018 pa 11: 44am PST
Masocial network akasimbisa nzira zhinji dzekutaura idzo nyanzvi inogona kuvimba nadzo kana ichinge yawana vateveri vatsva, uye muenzaniso wakanaka ndewemuverengi Kate Gavino. Uyu munyori mudiki weNew York uye illustrator ndiye ari kutarisira verenga mabhuku mazhinji sezvinobvira uye, kana wapedza, tsikisa caricature yemunyori webhuku achiperekedzwa nemutsara. Chikafu chinodakadza chinogona kukwana kubva kuna Zadie Smith kuenda kuna Gabriel García Márquez, ichipa nhoroondo inofadza vaverengi kupota nyika. Ehe, bhuku raGavino rakavakirwa pahunyanzvi uhwu rakakurumidza kuburitswa uye rinodaidzwa Kuverenga Kwemanheru Ekupedzisira: Mifananidzo Inosangana ine Vanyori Vanoshamisa.
Mugovera wekupedzisira paWOW UK.
Nzvimbo yakagoverwa Chimamanda Ngozi Adichie (@adichiechimamanda) on Mar 12, 2018 pa 7: 41am PDT
Munyori wemuAfrica anonyatsoburitsa makore gumi aya akauya kuzotiudza nyaya dze kurwadziwa uye hukadzi kubva kune yake yekuNigeria inoyevedza munhu wese uye nekumisikidza mitezo mitsva mune yekunyora diaspora. Uye kunyangwe Chimamanda anoita kunge asingade Instagram zvakanyanya, vanin'ina vake Chisom, Amaka naKamsi vanoita account yake pasocial network. Pakati pevhiki idzi, munyori akatanga chirongwa cheWear Nigeria, mune mapikicha aanoonekwa akapfeka madhirezi emuno kubva munyika yake, kunyange hazvo achivanza mabwe anokosha kune vateveri vake vakasimba.
Iyo yakasarudzika yemuteresi edition ye #TheHateUGive inowanikwa kuBarnes & Noble nhasi! Inosanganisira yakawanda yezvisarudzika zvemukati, zvinosanganisira iyo sneak peak pa #OnTheComeUp. Kutendeseka, iwo mapeji ekupedzisira akakosha iwo wega.
Nzvimbo yakagoverwa Angie Haatonge Mafirimu (@angiethomas) on Feb 27, 2018 pa 9: 44am PST
Uyu munyori weAmerica akazove mumwe wevanyori vakuru ve2017 mushure mekubudirira kwebhuku rake, Ruvengo rwaunopa (rakaburitswa muSpain neimba yekutsikisa GranTravesía), iyo yakazopfekedzwa korona se # 1 pane Iyo New York Times Bestseller Rondedzero. Nhoroondo yerusaruro yenguva dzakakodzera, bhuku rakabvumidza Thomas kunakidzwa nembiri iyo inodzika pa Instagram nemifananidzo yezvinyorwa zvake uye hupenyu hwezuva nezuva hunokwezva ivo vakawana zvemunyori uyu. Kusunungurwa kwake kunotevera, On the come up, kuchaburitswa muna Chivabvu 2018.
Akanga ari murume anoshamisa, pane izvo zvandine chokwadi. Kutarisa kwake kwainzwira tsitsi, kunyemwerera kwake, uye mazino ake aive akakombama. Akatakura amburera kudzivirira maziso ake kubva kuzuva, akafamba zvishoma nezvishoma achikwazisa munhu wese aisvika kwaari. Mutemo wega mudhorobha waive wekuti iwe unogona chete kubvunza Shaman mubvunzo mumwe. Chinhu chimwe chete, chero chaunoda, asi mubvunzo mumwe chete. Handina kumbofunga kuti ndiye Shaman; mupfungwa dzangu shaman ane vhudzi refu, asi ndozvakaita vanhu, havasi izvo zvaunotarisira kuti vave. Vanhu vakaungana pamwe chete vakamirira mukana wavo, Shaman akanyatsoteerera kumibvunzo, akambomira ndokuzopindura. Mhinduro dzake dzaive pfupi uye pfupi, pakanga pasina nzvimbo yekupindura. "Ndingafara sei?" akabvunza mumwe mukadzi uyo akanga akambundirana nemaruva. "Dzidza kunyemwerera" Akapindura Shaman ndokuenderera mberi achifamba pakati pevanhu kunge raft iri kuyambuka rwizi ruzere negwesha. "Mwari variko?" akabvunza murume ane masharubu. "Ask yourself" Akapindura Shaman achinongedzera moyo wake nechigunwe. Iye Shaman aive mamaera mashoma kubva kwandiri, paive nevanhu vakawanda mumusika asi pakanga pasina ruzha, mibvunzo chete nemhinduro zvainzwikwa. Ndakaburitsa kamera yangu uye pandakasimudza musoro Shaman aive akanditarisa kubva kumberi. Ndakazeza kusimudza kamera ndikati, "Ndingakutorerei mufananidzo?" Shaman uya akamira achinyemwerera. Ndakatora mufananidzo. "Chii chinonzi hupenyu?" Ndakakumbira. Shaman akanyemwerera ndokuti, "Unogona chete kubvunza mubvunzo mumwe chete, uye watobvunza kare." Ndakaisa maoko angu mumusoro pandakaona kuti pandakakumbira mvumo yekutora pikicha ndakanga ndabvunza mubvunzo. Shaman akandibata pabendekete achinyemwerera ndokuti: “Mhinduro kumubvunzo wako wekutanga ndeyekuti: Usazeze, ingoita chiito. Kukahadzika hakuna zvakunobatsira. Kusahadzika inguva chete yekusagadzikana ... usati waita. " 🎶 Verenga iyo uchiteerera: "Clint Mansell - Iyo Yero Imba" 🎶 💮 #NapkinTales # BrevísimosRelatos 💮
Nzvimbo yakagoverwa Alfredo Manzur • Munyori (@anotherwriter) pa Mar 4, 2018 pa 6: 21pm PST
Kwemavhiki mashoma apfuura ndanga ndichitevera munyori pa Instagram uyo anonyanya kukurudzira. Pasi pezita mumwe munyori, wekuMexico Alfredo Manzur anonyora zvaano funga nezve «napkin tales», kana nyaya dzaanosiya dzakanyorwa pamatehwe. Chikafu chemunyori ichi chinoonekwa nemifananidzo yemarudzi ese, kunyanya kubva mukufamba kwake, achiperekedzwa nenyaya kubva paupenyu hwake hwezuva nezuva. Yakakurudzirwa.
Nzvimbo yakagoverwa Monica Carrillo (@monica_carrillo__) pa Mar 10, 2018 pa 4: 46pm PST
Iye akakurumbira muratidziri weAntena 3 zvakare munyori mukuru akashandisa mukana wekudhonza we Instagram kuenda shambadziraiwo ake enhau diki-diki uye musimudzire mabhuku ake maviri, La luz de Candela naEl tiempo todo locura. Mutori wenhau ane vateveri vanopfuura zviuru makumi mashanu nezvishanu uye pakati pezvionekedzo zvake pane nguva nevaanoshanda navo kana zvido zvevakadzi.
Bhuku rega rega, vhoriyamu yega yega yaunoona, ine mweya. Mweya weakanyora uye mweya wevaverengi vakaiverenga vakararama nekuirota nezvayo.
Nzvimbo yakagoverwa Carlos Ruiz Zafon (@zafonoficial) on Jan 17, 2018 pa 2: 26am PST
Munyori we saga Iwo makuva emabhuku akakanganwa Akatanga basa rake pa Instagram gore nehafu apfuura asi atove akaunganidza vanopfuura zviuru makumi maviri vateveri pasocial network. Vese vanoda basa raZafon vachanzwa vakasununguka pavanowana mafambiro emunyori, kunyanya muguta reBarcelona kwaanopa makona emabasa ake achiperekedzwa nezvakataurwa navo. Rwendo runoshamisa kuburikidza nebhaibheri reimwe ye vanyori vakakurumbira venyika yedu.
Tarisa izvo zvakangosvika kwandiri! Thousand Kutenda chiuru @pilot_spain nemhinduro yakanaka uye nekunditumira iyi bateni yezvinyoreso kuti ndikwanise kuenderera nekusaina. Chiuru chekutenda zvakare kune vese imi makagonesa. Uye sekuvimbisa kwandakaita, ndangobvarura mapeni mashanu pakati penyu mese makaisa mhinduro kuti mundibatsire. Pakupera kwepositi ndakaisa chinongedzo chevakakunda. Kubva @pilot_spain vakanditumirawo mabhokisi maviri eMIKA limited edition kuitira kuti ndivabate pa profile, ndichazviita mumazuva mashoma. Nenzira, kana iwe uchida kuvatenda mune yekutaura eriquetando ingave yakanaka. WAITA HAKO. Ini ndakaisa vanokunda chinongedzo paprofile yangu. Nditumirewo meseji uye ini ndichaitumira kwauri #draw #pilot #read #book # elbolígrafodegelverde @somosinfinitoslibros @megustaleer
Nzvimbo yakagoverwa Eloy Moreno (@eloymorenoescritor) pa Mar 14, 2018 pa 1: 07am PDT
Desktop yekutsikisa ine zvakawanda zvekuita neiyo Instagram social network umo vanyori vanowana rusununguko rwekuburitsa zvinyorwa zvavo. Eloy Moreno, munyori we Iyo green gel peni, kubudirira kuAmazon mushure mekuburitswa kwayo, iwe unoziva zvakawanda nezvayo. Munyori wemamwe mabhuku seasingaonekwe, Zvandakawana pasi pasofa, Chipo kana Ngano kuti unzwisise pasirese, Moreno anoburitsa zvinyorwa zvekwaanoshanda, zvinyorwa zvinofambidzana nemifananidzo yezvakasikwa kana hongu, zvakare yemabhokisi egiridhi egirini.
Nzvimbo yakagoverwa Manuel Bartual (@ manuel.bartual) pa Mar 14, 2018 pa 2: 15am PDT
Pakupera kwaNyamavhuvhu 2017, tweet isinganzwisisike paakaundi yaManuel Bartual yakati "Ndave pazororo kwemazuva mashoma, muhotera iri padyo nemahombekombe. Zvese zvinhu zvaive zvakanaka kusvikira zvinhu zvisinganzwisisike zvatanga kuitika. Kubva ipapo, Twitter yakagadziriswa tisingazive kuti zvese zvaive nezve rondedzero iyo ino katuni uye munyori aipota nepakati pema micro-nyaya dzakasiyana. Mwedzi yakati gare gare, Bartual anoenderera mberi nekurwa hondo pasocial network, account yake ye Instagram iri nzvimbo yaanotora mukana wekugovana mifananidzo yemakambani enhau anonakidza, zvinyorwa kana mamwe emakatuni ake.
Nezuro mamirioni evakadzi airatidza kuti pamwe zvinogona kuitwa. Kunonyanyisa kudada. # PorMíyPorTodasMisCompañeras #PeleaComoUnaMujer 💪🏻💪🏻💪🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️ (ndatenda hembe @winkttd #ymedia)
Nzvimbo yakagoverwa Carme chaparro (@carmechaparro) on Mar 9, 2018 pa 9: 12am PST
Nevateveri vanopfuura zviuru makumi masere nepfumbamwe pa Instagram, Carme Chaparro ndomumwe wavo vanyori vanonyanya kushanda pa Instagram. Mutauri weiyo Nhau ina, mutori wenhau akahwina mubairo wePrimavera uye akashandura bhuku rake, ini handisi chikara, kuita rova yekunyora. Mudziviriri wekodzero dzevakadzi pamusoro pezvose, Chaparro akafemerwa.
Ndeapi maakaunzi evanyori pa Instagram aunotevera?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Wakanakisa Munyori Maakaundi pa Instagram
Ana Belén Cañete Jiménez akadaro
Mhoro! Ndiri Ana Cañete (@ana_bolboreta pa Instagram uye munguva pfupi yapfuura @anabolboretawrite paFacebook uye @ anabolboreta1 pa Twitter) uye ndinoda kukuudza nezvebhuku rangu, «Aparta, que no me ver!». Iyo mutambo wekudanana uyo wakakwanisa kuve nhamba 1 muboka revechidiki reAmazon, makumi matatu murudo uye pazasi pemakumi manomwe muzana mune mazuva gumi chete.
Sezvo zvakabuda zvakagamuchirwa kwazvo uye svondo rino shanduro yechipiri iri kubuda uye, kana uchinzwa saizvozvo, ndingafarire kuti iwe utarise.
Iyo yakaburitswa naMalbec Ediciones uye iwe unogona kuwana rumwe ruzivo pane yayo webhusaiti uye zvakare paAmazon.
Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu uye nezvakanakisisa.
-Iyo inogona kuverengerwa mahara pa KindleUnlimited
- Ini ndinodawo kunyora nhetembo.
Pindura kuna Ana Belén Cañete Jiménez
Ini ndinofunga kuti Jordi verdaguer Vila sivill's account inogadzira uye inonakidza uye yakakodzera kutaurwa.
Pindura kuna Julien
Cesar Fonseca akadaro
Ini ndangogadzira account pa Instagram, kushambadza yangu yega mafoto, achiperekedzwa nezvimedu zve nhetembo zvichinongedzera kudingindira remufananidzo wega wega. Ndinokukurudzira kuti utevere uye ufuridzirwe nechinoonekwa chigadzirwa uye nerwiyo meseji: fonsitesorprende
Pindura kuna Cesar Fonseca
Imwe yeakanakisa ndeye @juanpelb anobva kuColombia, uye iyo @literland peji
Ernesto Burquia akadaro
Kune account yemurume, anonzi @juanpelb, haisi monothematic asi inobata pamisoro yakawanda. Inotsvaira yakawanda yevanyori vavanotaura. Zvakafanana nezve @whatapoem Mexicana Laura Soto. Tiri nhoroondo mbiri dzinodiwa.
Pindura kuna Ernesto Burquía